जाजरकोट महामारी : मरेपछि ‘भर्बल अटोप्सी’ ! « प्रशासन
काठमाडौं । ज्यान गुमाएको डेढ महिनापछि जाजरकोटको जुनिचाँदे गाउँपालिकाका शिशु र वृद्धवृद्धा के कारणले मृत्यु भएको यकिन गर्न भर्बल अटोप्सी गर्न थालिएको छ । स्वास्थ्य सेवा विभाग, इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. भीम आचार्य भन्छन्, ‘मृत्यु भएकाहरूलाई जलाइसकेकाले के रोगले मरे भन्ने पुष्टिसहित मृत्युको सम्भावित कारण पत्ता पाउन भर्बल अटोप्सी (मौखिक रूपमा नातेदारसँग सोधपुछ) गर्छौं । लक्षणसहित सबै तथ्य लिएपछि के कारणले मरेको हो पत्ता लगाउन सकिएला भन्ने आशा छ ।’ सातदिने शिशुदेखि वृद्धले ज्यान गुमाएको डेढ महिनापछि थाहा पाएको सरकारले मरेका व्यक्ति कुन रोगले मरे भन्ने पत्ता लगाउन ‘भर्बल अटोप्सी’ (आफन्त र नातेदारसँग सोधपुछ गरेर पत्ता लगाउने तरिका) अपनाएको हो ।
जन्मिएको १० दिनमै जुनिचाँदे गाउँपालिका–२ का मनोज तिरुवाल र रमेश शाहीले ज्यान गुमाए । २५ दिनका धीरेन्द्र शाहीको पनि अल्पायुमै ज्यान गयो । सोही वडाका अढाई महिनाका रेवना नाथको पनि मृत्यु भयो । पुस १२ गतेदेखि प्रकोप फैलिएको हो
राज्यले नागरिकप्रतिको दायित्व निर्वाह गर्न सकेको छैन । संवैधानिक दायित्व पूरा गर्नबाट राज्य अक्षम भयो । डा. शरद वन्त, चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान, समुदाय चिकित्सा तथा जनस्वास्थ्य विभाग रोग प्रभावित क्षेत्रमा शनिबार गएको सरकारी टोलीले दुई बाकस औषधि उपलब्ध गराएको छ । रेडक्रससँग समन्वय गरी दुई सय थान कम्बल वितरण गरिएको डा. आचार्यले जानकारी दिए ।उनले भने, ‘जाजरकोटको ज्वरो पनि भाइरल । न्युज पनि भाइरल भयो । अखबारबाट थाहा पाएपछि थप क्षति हुन नदिन चिकित्सक र औषधिको पर्याप्त व्यवस्था गरेका छौं ।’ आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।